Umshini Wokushiswa KwamaShayina we-3 Point Hitch Mini Tractor Factory kanye Nabakhiqizi | UZhicheng
Umshini Womshini We-3 Point Hitch Mini Tractor
ukusebenza ngobubanzi 30-40cm
ukujula kokusebenza 20-60cm
amandla afanayo 25-100hp
Ngemuva kokuthi injini yedizili idabule ibhande iya ku-clutch, shayela ibhokisi lokuhamba, isendlalelo yokuhambisa, i-axle yangemuva njalonjalo ukuze uqaphele ukunyakaza okuhamba phambili noma emuva kweqonde kuma-chain grooves.
Isetshenziselwa kakhulu ukunisela, i-scallion, i-ginger, ukuvundiswa kwezithelo zezithelo, imifino ebamba ukushisa kanye nokukhipha izihlahla nokunye. Umsele obunjiwe uqondile, uqondile, ujule futhi ubanzi.
1. Ukugcina okuluhlaza okwenziwe ngeplastiki ngaphandle konqenqemeni lomhlaba nokusebenza kwemisele yemisele.
2. Ukudonsa kanye nokungenisa insimu ye-scallion kanye nensimu ye-ginger.
3. I-Orchard (i-apula, iparele, amagilebhisi, i-Persimmon, isihlahla sejuube, njll.) Ukusebenza komgodi wokufaka umgodi.
4. Umsebenzi wokudonsa amanzi we-Orchard kanye nomsebenzi wokunisela.
5. Umsebenzi wokutshala amagilebhisi wasebusika.
6. Umgodi wensimu ka-Mulberry, imisebenzi yokumanyanisa.
Efanele zonke izinhlobo zenhlabathi: inhlabathi elukhuni, ubumba, inhlabathi emnyama, intaba, inhlabathi ethambile ingasetshenziswa
1. amahora angama-24 kusetshenzelwa umugqa.
2. Lapho ihlangabezana nenkinga yokuhluleka komshini, ifektri yethu izoqinisekisa ukuthi inkinga ixazululwa kungakapheli ihora elilodwa.
3. Umshini wePovide ufake ividiyo.
4. 100% Ukulawulwa kwekhwalithi ngaphambi kokudlulisela phambili.
5. Nikeza ulwazi lwezinto, njengokuthunyelwa olwandle, ukuthunyelwa nge-Express DHL, ukulethwa kwe-FEDEX, insiza yokulandela ngomkhondo yangempela.
6. Isikhathi sokulethwa: Ezinsukwini ezingama-5-7 ngemuva kokuthola ukukhokhelwa kwamakhasimende.
Esedlule: Qeda Mower
Olandelayo: Ukulima Kabili I-4 Wheel Mini trektha